राष्ट्रपतिलाई श्री ६ बनाउनका लागि बजेट विनियोजन किन ? – Karnalisandesh
राष्ट्रपतिलाई श्री ६ बनाउनका लागि बजेट विनियोजन किन ?
प्रकाशित मितिः २५ जेष्ठ २०७७, आईतवार १२:२५ June 7, 2020
काठमाडौँ। नेपाली कांग्रेसका युवा नेता एवं पूर्व स्वास्थ्यमन्त्री गगन थापाले राष्ट्रपति शैक्षिक सुधार कार्मक्रमको शीर्षकमा छुट्याइएको वजेटलाई लिएर विरोध जनाएका छन्।
आइतबार संसदमा प्रस्तुत खर्च कटौती प्रस्तावमा भाग लिँदै सांसद थापाले शिक्षामन्त्रीको मनमा राष्ट्रपतिलाई श्री ६ बनाउने रहर कहाँबाट आयो ? भन्दै प्रश्न गरेका छन्।
उनले भनेका छन्, ‘राष्ट्रपति शैक्षिक शिक्षा कार्यक्रम भनेर हिजो राजाले बक्सिस बाढेको जस्तो राष्ट्रपति खुट्टा टेकेको ठाउँमा मन लाग्दि पैसा दिने कार्यक्र संघीयता विरोधी छ। संविधान विरोधी छ। व्यवस्था विरोधी छ।’
उक्त राष्ट्रपति शैक्षिक सुधार कार्यक्रमका नाममा गत आर्थिक वर्ष पाँच अर्ब बजेट छुट्याइएको थियो। नयाँ आर्थिक वर्ष ०७७÷०७८ को लागि ६ अर्ब बजेट विनियोजन गर्ने प्रस्ताव छ। उक्त रकम छुट्याउँदै गर्दा शिक्षामन्त्री र अर्थमन्त्रीलाई एबीसीडीमा बसेका सहजकर्ताको किन याद आएन भन्दै सांसदले प्रश्न गरेका छन्।
ृउनले भनेका छन्, ‘हाम्रो कार्यविधि भन्नु होला। कार्यविधि के हो ? हामीलाई पनि थाह छ। कार्यविधि हामीले पनि पढेका छौं। तलब खान नपाएका कर्मचारीको याद आएन ? विश्वविद्यालयका आंशिक प्राध्यापकहरु भोकै बसेको याद आएन ? सात हजार विद्यालय मध्ये सात सय विद्यालयमा मात्रै दरबन्दी पुगेकोछ। यतातिर ध्यान नदिने ? तर, एक जना शिक्षक राख्न नसकेको शिक्षक स्वयं सेवक कार्यक्रमलाई एक अर्ब ५० करोड बढाएर दुई अर्ब २३ करोड बनाउने ? सबैभन्दा उदेक लाग्दो कुरा के छ भने शिक्षा मन्त्रालयलाई ९० लाख विद्यार्थीहरु विद्यालय गइरहेका छैनन् भन्ने कुरा थाह छैन।’
एसईई खारेजलगायतका बोल्ड निर्णय गरौं भनेर आग्रह गरेको भए पनि सुनुवाइ नभएको र बजेटले निराश बनाएको उनले बताएका छन्।